Real Madrid iyo PSG oo qayb ka ah saddex naadi oo isku haya saxiixa Jesse Lingard – Gool FM
(London) 12 Abriil 2021. Xiddiga amaahda uga maqan kooxda Manchester United ee Jesse Lingard ayaa haatan xiiso ugub ah ka helaya qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub.
Real Madrid, Paris Saint-Germain iyo Inter Milan ayaa dhamaantood xiiso u muujinaya adeegga laacibka West Ham United amaahda ugu ciyaaraya.
Lingard ayaa qaab ciyaareed cajiib ah lasoo baxay tan iyo markii uu bishii January ee sanadkan qaab amaah ah ugu biiray naadiga London ka dhisan. waxaana uu dhaliyay siddeed gool kaddib sagaal kulan oo uu Premier League u ciyaaray Hammers isagoo dib u kasbaday in looga yeero xulka qaranka England.
28-jirkan ayaa soo jiitay indhaha kooxo badan oo qaaradda Yurub ka dhisan, xilli West Ham qudheeda ay dooneyso inay heshiiskiisa amaahda ah ay u rogaan mid rasmi ah marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, warsidaha ESPN ayaa qoraya in bandhiggii Lingard ee shalay kulankii uu labada gool ka dhaliyay kooxda Leicester City ciyaartii ay kooxdiisa 3-2 ku adkaatay uu kusoo jiitay kooxaha Madrid, PSG iyo Inter.
Warka ayaa intaas ku daraya in saddexda naadi raadinayaan fursad ay xiddigan kusoo iibsan karaan suuqa xagaaga ee soo aaddan.
Dhanka kale, Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay dooneyso inay laacibkan ka iibiso West Ham si ay heshiis is dhaafsi ah kaga soo baddeshaan Declan Rice.
"Wakiilka Vinicius waa uu na khiyaanay" - Barcelona